Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) - Hello Sayarwon
Phyo Wai Yan မှ ရေးသားသည်။ 28/11/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်|လက္ခဏာများ|အကြောင်းရင်းများ|ဖြစ်နိုင်ခြေများ|ရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် ကုသမှု|နေထိုင်မှုပြုပြင်ခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးဝါးများ
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကဘာလဲ။
ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဆိုတာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး အာရှနဲ့ ပစိဖိတ် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါတွေထဲမှာ အဖြစ်များဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အာရှဒေသကို အလယ်လာတဲ့ ခရီးသွားတွေအတွက်ကတော့ ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ(JE) ကကူးနိုင်ခြေနည်းပြီး ဒါကလည်း ဦးတည်ရာဒေသ, ကြာချိန်နဲ့ ရာသီဥတု, လုပ်ငန်းတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။
JE ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဝက်နဲ့ငှက်တွေလို ကျောရိုးရှိတွေနဲ့ ခြင်တွေကြားမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပြီး ကူးစက်ခံနေရတဲ့ ခြင်ကိုက်ရင် လူကိုလည်း ရောဂါရစေတတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ လက္ခဏာပြလေ့မရှိပဲ ပြရင်လည်း အပျော့စားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့သော ကူးစက်ခံရသူတွေက ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ရောဂါအထိဖြစ်ကြပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်း၊ မေ့မြောခြင်း၊ လက်ခြေတုန်ခြင်း နဲ့ တက်ခြင်း စတဲ့လက္ခဏာတွေ ခံစားရပါတယ်။ ဖြစ်သူလေးယောက်မှာ တစ်ယောက်နှုန်း သေဆုံးနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကုသမှုလဲမရှိပါဘူး။ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းတွေကတော့ ခြင်ကိုက်မခံရအောင်နေတာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဟာ အာရှမှာအဖြစ်များဆုံးရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ကို case ၇၀၀၀၀ လောက်စီစစ်ရရှိတတ်ပါတယ်။ အချို့ အချက်အလက်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အဖျား , ခေါင်းကိုက်ခြင်း, နဲ့ အန်ခြင်း
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများ, အာရုံကြောပြသနာများ, ရက်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ
ကလေးများတွင် အတက်ရောဂါ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုတွေ့လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တွေက လုပ်ဆောငိမှုမတူကြတဲ့အတွက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပါ။
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ( JE )ကို ဖြစ်စေသလဲ?
JE ကို ဖြစ်စေတဲ့ flavivirus ဟာ West Nile နဲ့ St. Louis encephalitis viruses တို့နဲ နီးစပ်ပါတယ်။Culex tritaeniorhynchus ခေါ် ရောဂါရှိနေတဲ့ ကျူ းလက်ခြင်ကိုက်ရာကနေ လူကိုကူးစက်ပါတယ်။
JE ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဝက်နဲ့ငှက်တွေလို ကျောရိုးရှိတွေနဲ့ ခြင်တွေကြားမှာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတာဖြစ်ပြီး လူတွေကတော့ မတော်တဆ ဒါမှမဟုတ် အဆုံးသတ်ကူးစက်ခံရ တဲ့ သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခြင်ကို ပြန်ကူးစက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ပိုးပမာဏ လူတွေမှာမဖြစ်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
JE ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကျေးလက်နဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံတဲ့ ဒေသတွေမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စပါးစိုက်ပျိုးရာဒေသတွေပါ။ တစ်ချိုးအာဆီယံဒေသတွေမှာတော့ မြို့ပြအနီးမှာပါ ဖြစ်ပွားကြပါတယ်။
အာရှရဲ့ သမပိုင်းဒေသတွေမှာ JE ပိုးကူးဆက်တာဟာ ရာသီလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူကိုကူးစက်တာတွေကတော့ နွေဦးနဲ့ ဆောင်းဦးကာလတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အပူပိုင်းဇုံတွေမှာ ကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်မိုးတွင်းကာလပါ။
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကျေးလက်ကို အလည်ရောက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တကယ်လို့သင့်မှာ ရောဂါရှိနေပြီလို့ ဆရာဝန်က သံသယရှိရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခိုင်းပြီး အခြားစမ်းသပ်မှုတွေလည်း လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာတော့ သွေးရည်ကြည် ဒါမှမဟုတ် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအရည်(cerebrospinal fluid (CSF) ကိုယူပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ antibody ကိုစစ်ဆေးပါတယ်။JE virus ရဲ့ antibody တွေဟာ ဖျားပြီး ၃ရက်ကနေ ၈ ရက်ကြာချိန်မှာ ထွက်လာတတ်ပြီး ရက် ၃၀ ကနေ ၉၀ အထိခံနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်လည်းပိုခံနိုင်ပါတယ်။IgM စစ်လို့တွေ့တာကလည်း ရောဂါရှိလို့ ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖျားပြီး ၁၀ ရက်မှာယူတဲ့ သွေးရည်ကြည်မှာ IgM မပါနိုင်တော့လို့ သင့်တော်တဲ့ နမူနာ ကိုထပ်စမ်းသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
JE ရှိတဲ့ လူနာတွေမှာ confirmatory neutralizing antibody testing စမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။ သေနိုင်လောက်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေမှာ nucleic acid amplification, histopathology with immunohistochemistry, နဲ့ တစ်ရှူ းစစ်ဆေးတာတွေပါ လုပ်သင့်ပါတယ်။
Japanese Encephalitis (ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကုသမှုမရှိသေးပါဘူး။ ဆေးရုံတင်တာ supportive care(အနီးကပ်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှု) ပေးတာနဲ့ အနီးကပ်ကုသတာတွေ တော့လိုအပ်ပါတယ်။
ကုသမှုတွေကတော့ လက္ခဏာကို လိုက်ပြီးကုသတာဖြစ်ပါတယ်။ အနားယူခြင်း၊ ရေဓါတ်ဖြည်ခြင်း၊ အဖျားကျအောင် ဆေးပေးတာ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးပေးတာတွေက သက်သာမှုရှိစေပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရတော့ လူနာ ၂၀ ကနေ ၃၀ % ကတော့ သေဆုံးနိုင်ချေရှိပါတယ်။
ဖျားပြီးနောက်မှာ အချို့ လက္ခဏာတွေပြန်သက်သာကောင်းသက်သာနိုင်ပေမယ့် ၂၀ ကနေ ၃၀ % ကတော့ အာရုံကြော နဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုက်ရာ ချို့ ယွင်းမှုတွေ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါ နဲ့ သင့်တော်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ဘာတွေလဲ?
အောက်ပါ နေထိုင်မှုပုံစံတွေက ဂျပန်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါနဲ့ သင့်တော်ပါတယ်။
သင်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် EPA အသိမှတ်ပြု DEET, IR3535, picaridin , လီမွန်ဆီနဲ့ ယူကလစ်ဆီတို့ပါဝင်တဲ့ ခြင်နိုင်ဆေးတွေသုံးသင့်ပါတယ်။ ခဏအပြင်ထွက်တာက ခြင်ကိုက်ခံရဖို့အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
ရာသီဥတုနဲ့ အဆင်ပြေရင် အကျီလက်ရှည်, ဘောင်းဘီရှည်နဲ့ ခြေအိတ်တွေဝတ်ပြီး နေပါ။
ခြင်ကိုက်များတဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားတွေမှာ ခြင်နဲ့ ထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဂရုပြုပါ။
JE virus ဖြစ်စေတဲ့ခြင်တွေဟာ မွန်းလွဲနဲ့ အာရုံတက်ချိန်အထိ အေးစိမ့်တဲ့ အချိန် တွေမှာ ကျက်စားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကူးစက်မှုမြင့်မားတဲ့ ဒေသတွေကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ခရီးသွားတွေအနေနဲ့ ဒီလိုအချိန်တွေမှာအပြင်ထွက်တာကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ချပါ။
JE ရာသီတွေမှာ ကူးစက်ချေများတဲ့ဒေသတွေမှာ တစ်လသို့မဟုတ် ဒီထက်ပိုပြီး နေထိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ ခရီးသွားတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
JE ရာသီတွေမှာ ကူးစက်ချေများတဲ့ဒေသတွေမှာ တစ်လအောက်နေထိုင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတဲ့ ခရီးသွားတွေမှာ မြို့ပြအပြင်ထွက်လည်ပတ်မယ့်အစီအစဉ်တွေ virus ထိတွေ့မှုများနိုင်ချေရှိတဲ့အခြေအနေဆိုရင် ထိုးသင့်ပါတယ်။
JE ဖြစ်ပေါ်နေဆဲ ဒေသတွေကို သွားမယ့်သူတွေ
JE ဖြစ်ပွားရာနေရာတွေသွားပြီး ဒေသအတိအကျမသိ ,အလုပ်နဲ့ ကြာချိန်အတိအကျမသိရတဲ့သူတွေဆိုရင် ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
JE virus ရာသီနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ရာဒေသတွေကို မသွားမယ့်သူတွေ ခရီးတိုသွားမယ့်သူတွေကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးသင့်ပါ။
https://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/healthcareproviders/healthcareproviders-diagnostic.html . Accessed February 23, 2017.